indlela yokwenza izinhlanzi ezintantayo zokudla ezihamba ezintabeni
Kanye nesidingo esikhulayo semikhiqizo yasemanzini kanye neholo elandayo labantu, Izolimo zasemanzini e-Afrika sezithuthuke ngokushesha kusukela ekuqaleni kwalelikhulu leminyaka. E-Afrika, i-aquaculture ingahlukaniswa ibe ngamamanzi angenasawoti emanzini kanye nasolwandle olwandle lwasolwandle. I-Fish feed extruder yenzelwe ukukhiqizwa kokuphakelwa emanzini emanzini ase-Afrika angenamanzi asemanzini.
Dry uhlobo lwenhlanzi eyengeziwe, okubizwa nangokuthi yi-fish feed pellet mill, isetshenziswa kabanzi ukukhiqiza izinto ezahlukahlukene zibe ngamaphakethe wezinhlanzi zasemanzini eziphezulu, inhlanzi eyikati, ama-shrimps, crab njll. Ama-pellets wokugcina wokudla anokwakheka okuhlukile nokunambitheka okuhle, ukondleka okuphezulu nokwenziwa bushelelezi. Okokuphakelwa kwezinhlanzi nezinhlanzi, isikhathi esintantayo kumanzi angaphezulu singalungiswa ngokulungiswa kwe-extrusion degree lapho kukhipha ama-pellets. Okwamanje, extruder yokudla okuntantayo isibe indawo enhle yepulazi lezinhlanzi elincane neliphakathi (inhlanzi eyikati, tilapia, i-shrimp njll.) abanikazi noma isitshalo sokuphakelwa kwezinhlanzi.
Izinto ezijwayelekile zomshini wepellet wezinhlanzi
Izingoma ezifakiwe zokusongwa kwe-catfish kanye nokudla kwezinhlanzi,Abadobi bangashintsha izinhlobo ezahlukene zezinto zokuhlanza ngokusho kwenhlanzi yabo.